Mulkiilaha Liverpool Ee John W Henry Oo Magacaabay Saddexda Ciyaartoy Ee Uu Xili Ciyaareedka Cusub Doonayo In Uu In Badan Arko. - Gool24.Net
Mulkiilaha Liverpool Ee John W Henry Oo Magacaabay Saddexda Ciyaartoy Ee Uu Xili Ciyaareedka Cusub Doonayo In Uu In Badan Arko.
Mulkiilaha kooxda Liverpool ee John W Henry oo ah shaqsi aan waraysi badan bixin isla markaana maamulka kooxdiisa uga danbeeya shaqada uu u igmaday ayaa shaaciyay saddexda ciyaartoy ee uu jecel yahay in uu xili ciyaareedka cusub arko iyaga oo wax badan kooxda ku lug leh.
John W Henry oo horumar layaableh ku sameeyay kooxda Liverpool tan iyo markii ay shirkadiisu la wareegay Reds ayaa doonaya in uu arko xidigo aan xili ciyaareedkii la soo dhaafay saamayn badan yeelan oo uu rajaynayo in xili ciyaareedka cusub ay shaqo fiican qaban doonaan.
Saddexda ciyaartoy ee uu John W Henry doonayo in uu wax badan arko xili ciyaareedka cusub ayaa kala ah Alex Oxlade-Chamberlain, Adam Lallana iyo Divock Origi.
Maamulka iyo mulkiilaha Liverpool ayaa isku raacsan in Divock Origi heshiis cusub lagu abaal mariyo kadib bandhigii layaabka lahaa ee uu xili ciyaareedkii la soo dhaafay ku soo xidhay halka Alex Oxlade-Chamberlain oo muddo sanad ah dhaawac ku maqnaa ay rajaynayaa in uu saamayntiisii soo ceshado.
Adam Lallana oo isna dhaawac culus awogii ku waayay saamayntii uu shaxda Klopp ku lahaa ayuu John W Henry rajaynayaa in uu dhibaatada ka soo dhex baxo.
Saddexdan ciyaartoy ayay sharaf u tahay in mulkiilaha kooxdoodu si khaas ah uga hadlay arintooda mustaqbalka iyada oo Klopp uu rajaynayo in ay Lallana iyo Chamberlain taam buuxa u noqdaan xili ciyaareedka cusub.
Mulkiilaha Liverpool ee John W Henry oo arintan ka hadlaya ayaa yidhi: “Waxaanu u baahanahay in aanu caafimaad qab helno. Waxaanu u baahanahay in aanu dib u helno Alex Oxlade-Chamberlain, waxaanu u baahanahay Adama Lallana oo caafimaad qaba”.
Mulkiilaha Liverpool ee John W Henry oo ka hadlaya In Origi uu fursad badan heli doono inkasta oo ayna shaqadiisa ahayn ayaa yidhi: “Aniga ima khusayso laakiin waxaan qiyaasi karayaa in aynu in badan arki doono Origi sanadka soo socda (xili ciyaareedka cusub), waxaan filayaa in uu wax khaas ah keenay, waxa uu la yimid, awood iyo xawaare, wuxuuna keenay gool dhalin”.
John W Henry ayaa wanaag ka dareemaya xili ciyaareedka cusub ee kooxdiisa Liverpool ku soo wajahan wuxuuna yidhi: “Anigu xaqiiqdii wanaag ayaan ka dareemayaa sanadka soo socda”.
Liverpool ayaan xagaagan wali samayn wax saxiixyo muhiim ah inkasta oo uu Klopp cadeeyay in haddii ay doonayaan in ay kooxaha la tartamaan in ay waajib ku tahay in ay suuqa galaan.